QISO XANUUN BADAN: “Waxa La I Kufsaday Maalintii Arooskayga.." | Dhamays Media Group
QISO XANUUN BADAN: “Waxa La I Kufsaday Maalintii Arooskayga..”
Nairobi (Dhamays) – Labo masiibo ayaa maalintaas qabsatay gabadhan yar oo baadari ka ahayd Nairobi, laakiin way bedbaaday.
Waxay ahayd xaflad aroos oo wayn sababtoo waxaan ahaa baadari dadkii kiniisadda ku xidhnaa oo dhan iyo qaraabada ayaa iman lahaa.
“Aniga iyo Harry oon is calmanayba aad ayaan u faraxsanayn – wuxuu aroosku ka dhici lahaa kiniisadda All Saints Cathedral ee magaalada Nairobi waxaana soo kiraystay toob qurux badan. Laakiin habeenkii ka horreeyay arooska ayaan ogaaday in aan hayo qaar ka mid ah dharkii arooska ee Harry oo uu ka mid ah yahay taygiisii oo la'aantii aanu xafladda imaan karin, marka gabadh aan saaxiibbo nahay oo habeenkii nala seexatey ayaa noo soo bandhigtay in uu aroorta horaba u geeyo. Subax hore ayaan kacnay aniga iyo iyaddaba si aan u gaadhsiiyo meeshii ay baska ka raaci lahayd. Markii Terry Apudo ay soo xaadiriwayday xafladdii arooskeeda qofna ma malaynin in la afduubtay oo la kufsaday haddana meyd ahaan looga tagay iyada oo waddo hareerteed taala. Ragga midba mar ayuu i kufsadey. Waan hubay in aan dhimanayo, laakiin weli waxaan u dagaalamayey nafteyda, markii mid ka mid ahi uu alaabadiisii kala baxay afkayga ayaan ka qaniiney cisalka (Xiniinyaha) Xanuun ayuu la qayliyey kadibna caloosha ayey toorey iga geliyeen. Kadib daaqadda ayey gaadhiga fureen oo iga tuureen. In badan ayaan guriga u jirey, meel ka baxsan Nayrobi ayey ahayd. Ilaa lix saacadood ayaa kasoo wareegey ilaa xiligii la i afduubey.”
Gabadhan oo Qisadeeda Xanuunka badan ka sii warramaysa ayaa sheegtay “Ilma yar ayaa i arkey markay gaadhiga iga tuureen oo u yeedhay ayeydii . Dadkii ayaa igu soo yaacay. Markii booliisku yimi, waxay eegeen in aan neefsanayo, laakiin uma ay muuqan. Waxa ay u maleeyeen in aan dhintey, kadibna buste ayey igu duuduuben oo waxay ii qaadeen meesha meydka la dhigo. Jidka annaga oo ku sii jirna ayaan saxdey oo aan kadibna qufacay. Nin booliis ah ayaa yidhi 'wey nooshahay'? Gaadhigii ayuu dib u celiyey waxaanay i geeyeen cusbitaalka ugu weyn dowladda ee Kiiniya. Waxa cusbitaalka la i keeney anniga oo naxsan, si jaah wareer ah ayaan u hadlayey, jidhkeyga qayb badan ayaa qaawaneyd, dhiigna wuu iga da'ayey. Wajigeyga feedhkii ayaa barariyey. Laakiin wax ayaa u sheegey gabadha mas'uulka ka ahayd xarunta caafimaadka in aan caruusad ahay, 'waxay tidhi ina keena aynu soo eegno kiniisadda in ay jirto gabadh caruusad ah oo la waayey', kalkaaliyayaasha caafimaadka ayey ku tidhi. Si lama filaan ah, kiniisaddii u horeysey ee ay soo gaadheen waxa ay ahayd kiniisadda All Saints Cathedral. 'Miyaad weydeen caruusad ayey weydiiyeen?' kalkaalisada ayaa weydiisey.
Markii aanan iman kiniisadda iyo waalidkey wey warwareen. dad ayaa la direy isoo raadiya. warkii ayaa la isgaadhsiiyey. Dadka qaar ayaa isweydiiyey, 'tolow miyey is beddeshay?'qaar waxay isweydiiyeen, 'Maya, qof noocaas ah maaha, wax ayaa ku dhacay?'
Saacado kooban kadib, waxyaabihii goobta lagu qurxiyey ayaa laga furey, si arooskii igu xigey loogu baneeyo goobta. Harry qol ayaa la fadhiisiyey. Markii ay maqleen meesha aan joogo, waalidkey iyo dhamaan martidii ayaa ii timid. Harry waxa uu siddey toobkii arooskayga. Warbaahintuna war yar ayey heleen oo goobta ayey yimaaddeen. Cusbitaal kale oo aan ku heli karo waxoogaa dhowrsanaan ah ayaa la i geeyey. Cusbitaalkaas ayey dhakhaatiirtu igu toleen oo iigu sheegeen warka naxdinta leh ee in aanan dhali doonin caruur. "tooreydii ay i geliyeen ayaa gaadhey ilmo galeenka oo keeneysa in aanan caruur dhali doonin."
Harry waxa uu ku celcelinayey in uu wali doonayo in uu i guursado 'Waxaan doonayaa in aan ku xanaaneeyo oo aan hubiyo in aad caafimaado anniga oo gacanta kugu haya, gurigayga'. Ma aan ku sugneyn xaalad aan ku idhaahdo Haa ama Maya, waayo maskaxdeyda waxa ka guuxayey wajiyada saddex nin iyo wixii dhacay oo dhan.
Dhowr caano-maal kadib, markii aan caadi kusoo yara noqdey, waxa ii suurta gashay in aan eego, waxaan ku celceliyey waan ka xumahay. Waxaan dareemayey in aan lugooyey. Dadka qaar ayaa yidhi waan ku khaldanaa in aan guriga ka baxo alaseydii hore. Runtii waan dhibanaa, laakiin qoyskeyga iyo Harry ayaa i caawiyey.
Booliiska kuma ay guuleysan in ay soo xidheen raggii I kufsadey, niman badan ayaa la i tusay, laakiin kuma aan guuleysan in aan garto. Markasta oo la i tuso rag, wey igu adkeyd – arrintani waxay dheereysey in aan ka kaco dhaawicii isoo gaadhey. Waxay la mid ahayd markaan 10 talaabo hore u qaado in aan 20 talaabo dib u qaado. Ugu danbeyntii booliiska ayaan ku noqdey: 'waxaan ku idhi waan iska deynayaa, waan ku daaley, joojiya'.
Saddex todobaad kadib markii la i kufsadey waxa la ii sheegey in aanan qaadin xanuunka HIV, aad ayaan u farxay, laakiin waxa la ii sheegey in aan sugo saddex bilood oo kale si loo hubsado. Wali anniga iyo Harry waxaanu sii wadney in aanu qorsheysano arooskayagii.
Inkasta oo aan aad uga cadheysnaa faragelinta warbaahinta, qof ayaa akhriyey sheekadeyda oo iga codsadey in aan la kulmo. Magaceedu waxa uu ahaa Ogolla, iyadana hore ayaa loo kufsadey. Waan hadalney, waxa ay ii sheegtey in iyada iyo saaxiibadood ay doonayaan in ay bixiyaan kharashka arooskayga. 'Waxaad doonto kharash garee, siddaad doonto yeel ,' ayey tidhi'.
Waan farxay. Waxaan iibsadey doorshe/keeg nooc kale ah, oo aad qaali u ah. Halkii aan ka kireysan lahaa toobka aroosada, mid aan leeyahay ayaan heli karaa.
29 caano-maal kadib, annaga oo guriga joogna habeen dhaxani jirtey, Harry girgire dhuxul ka baxayso ayuu soo shidey, waxaanu keeney qolkii hurdada. Cashadii kadib, dhuxushii dibbada ayaanu u saarey iyada oo qolkii kululaadey. Bustaha ayaan hoosta ka galay intii uu albaabka xidhayey. Markii uu sariirta soo galay waxa uu yidhi waan dawakhayaa, laakiin wax weyn kama aanu soo qaadin.
Qabow ayey noqotey, markaas ayaan ku idhi Harry buste kale inoo soo qaad . Laakiin Harry waxa uu igu yidhi masoo qaadi karo oo awood uma hayo, mana istaagi karayo ayuu raaciyey. Waxaan garaney in ay wax khaldan yihiin. Wuu suuxay, ana waan suuxay. Waxaan sii xasuustaa in aan u dhawaaqo, mar mar wuu ii jawaabayey, mar marna iima uu jawaabeyn. Waxaan isku khasbey in aan sariirta ka dego oo aan matago, awood yar ayaan heley. Waxaan u gurguurtey telefoonka oo waxaan wacay deriska oo aan u sheegey 'in ay wax si yihiin oo aanu Harry hadli kareyn'.
Markiiba wey noo timi, laakiin wakhti dheer ayey igu qaadatey in aan albaabka gaadho anniga oo marba suuxayey. waxaan arkey dad badan oo buuqaya oo soo socda. Haddana waan suuxay. Waxaan ku toosey cusbitaalka, waxaanan weydiiyey meeyey ninkeygii? Waxay ii sheegeen in ay qolka kale ku eegayaan. Waxaan ku idhi 'waxaan ahayd baadariyad, waxyaabo badan ayaan arkey, runta ii sheega.' Dhakhtarkii ayaa isoo eegey oo igu yidhi 'Waan ka xumahay ninkaagii ma uu badbaadin.'
Waan u qaadan waayey. aad ayey u adkeyd markii aan kiniisadda ku noqoney aaskiisii. Bil uun ka hor halkan ayaan joogey anniga oo xidhey toobkaygii caddaa, Harry wuu i agtaanaa isaga oo sita suudh uu aad ugu soo baxay. Iminka waxaan sitaa toob madow, Harry na waxa lagu soo riixey naxash. Dadku waxay u maleynayeen in aan ahay qof la falay, caruurtoodii ayey iga celiyeen. 'Wey falan tahay ayey yidhaahdeen'. Mar ayaan xataa annigu siddaas aaminay.
Maalin waxa aan fadhiyey balakoonka guriga, waxaan daawanayey shimbiraha duul duulaya, waxaan idhi, 'Ilaahow, sidee ayaad u ilaalisaa shimbiraha oo aad anniga ii ilaalin kari weydey?' Isla ilbidhiqsigaas ayey igu soo dhacdey in maalintu 24 saacadood tahay, haddii aan dhex fadhiyo guriga oo aan daahyadana xidho cidi iima soo celineyso 24kaas saacadood. Adiga oo aan dareemin waa toddobaad, bil, sannad aad khasaareysay. Waxay ahayd xaqiiq adag.
Waxaan qof kasta u sheegey in aanan waligay mar kale guursan doonin. Ilaahay ayaa ninkeygii iga qaadey, in mar labaad arrintaas oo kale igu dhacdana waa wax igu adag. Waa arrin aanan qof kale la rabin in ay ku dhacdo. Xanuun badan ayey lahayd, ciddiyaha ayaad ka dareemeysay. Laakiin waxa jira nin magaciisa la yidhaahdo Tonny Gobanga oo si joogto ah ii soo booqan jirey. Waxa uu igu dhiiri gelin jirey in aan ka hadlo ninkeygii oo aan ka fakaro wakhtigii wanaagsanaa ee aanu soo wada qaadanay. Mar ayuu iga maqnaa saddex caanamaal, aadna waan uga cadhoodey. Markaas ayaan ogaadey in aan jeclaadey.
Tonny waxa uu tagay gurigoodii si uu ugu sheego aabihii, aad ayey ugu farxeen ilaa ay ka maqleen sheekadeydii. "Ma guursaneysid ayey ku yidhaahdeen, wey falan tahay,' Soddogey wuu diidey in uu yimaaddo arooskayagii, laakiin waanu iska wadaney howshayada, 800 oo marti ah ayaa timi, qaar badani waxay u yimaadeen in ay na arkaan uun.
Saddex sannadood ayaa kasoo wareegtey arooskeygii hore, waanan baqayey markii meherku dhacayey. Waxaan ka fakarayey, 'weykan mar kale Ilaahoow, fadlan ha iga dilin.' Intii dadkii noo ducaynayeen, aad ayaan u ooyayey.
Maanta, saaxiibka ugu wanaagsan ayaan la ahayd soddogey. Buug ayaan ka qorey xaaladeyda. Ka Gurguurashadii Madowga. Si aan dadka u siiyo rajo ay ku kacaan mar kale.
Waxa kale oo aan aasaasey urur la yidhaahdo Olmurani. Waxa aanu ku caawinaa dadka kufsiga ka badabaada waa sidaan ugu yeedha'e. uguma yeedho dhibanayaasha la kufsadey.
Waxaanu ku caawinaa talo iyo taageero. Waxa aanu wadnaa guri ay yimaaddaan inta ay u diyaar garoobayaan in ay mar kale qaabilaan dibada.
Waan cafiyey kuwii i weerarey. Ma ay fududeyn runtii, waxaan dareemey in ay anniga uun cadhadu wax i yeeleysay, maaddaama oo aanay ogeyn dadkan aan u cadheysanahayba. Diinteydu waxa kale oo ay igu dhiiri gelisaa i aan wax cafiyo oo aan shar kaga jawaabin shar kale, laakiin aan kaga jawaabo wanaag.
Previous: “Xukuumadda Waxaanu Leenahay Afartaa Bilood Ee Idiin Hadhay Dadka Oo Mideysan Gaadhsiiya (Doorashada)…” Sheekh Aadan-Siiro
Next: Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Oo Hadhimo-Sharafeed Ku Maamuusay Bahda Warbaahinta Somaliland